» हेटौंडा अस्पतालमा बग्रेल्ती समस्या
२५ जेष्ठ २०७९, बुधबार १३:१५
बागमती प्रदेशको राजधानीे हेटौंडामा रहेको सरकारी अस्पतालमा बग्रेल्ती समस्याहरु देखा परेको छ । जो कोही उपचारका लागी अस्पताल पुग्छन उनिहरुले उपचार पाउन सास्तीनै खेप्नुपर्ने अबस्था छ । स्वास्थ्य उपचारका मामिलामा निकै सुस्त र धेरै झझंटिलो रहेको भन्दै बिरामीहरुले सामाजीक संजालहरुमा चर्को आलोचना गरीरहेकाछन् । बिरामी भएर उपचारका लागी हेटौंडा अस्पतालमा बिहान ८ बजे पुगेका एक बिरामीले आफुले भोग्नु परेको समस्या सार्वजनिक गरेकाछन । बिहान ८ बजे अस्पताल पुगेका बिरामी टिकट काट्न लाईनमा बस्छन् । करीब २ घण्टा लाईनमा बसेपछि उनले टिकट पाउछन टिकट लिएपछि उनि डाकटरसंग चेकअपको लागी फेरी लगभग १ घण्टा लाइनमा लाग्छन । चेकअपपछि ल्याबको लागी बिल काट्ने लाइनमा फेरी एक घण्टा बस्नुपर्छ । बिल काट्ने लाइनमा २ घण्टा बिताएर काउन्टरमा पुगेपछि यसको बिल आज काटिदैन भोलि बिहान ८ बजे आउनुहोस भनेर भनिन्छ । भोलिपल्ट बिहानै हस्याग फस्याग गरेर उ अस्पताल आउछ ।
बिहान ८ बजे लगभग एक घण्टाजति लाइनमा बसेर बिलकाटेपछि ल्याबको परीक्षणको लाइनमा लाग्नुपर्छ । परीक्षण सकेपछि ल्याबको रिपोर्टलिने लाइनमा लाग्नुपर्छ । यो रिपोर्ट लिनपनि करीब आधा देखी एक घण्टा कर्मचारीलाई कुर्नपर्छ । रिपोर्ट पाइए अब डाक्टरलाई रिपोर्ट देखाउने लाइनमा फेरी अर्को दुईघण्टा बस्नैपर्छ । कोहीकोही त निद्रा लागेर पेटीतिरनै बसिरहेको देख्न सकिन्छ । नाम कतिखेर आउला भनेर कुर्दाकुर्दा दिन बित्न नपाउदै जे होस डाक्टरकोमा पुगीन्छ । डाक्टरले रिपोर्ट हेरेपछि औषधि लेखिदिन्छन ।
यसपछि अर्को ठुलो फड्को भनेको फार्मेसीमा लाइन बस्नुपर्ने समस्या । यहाँ करीब दुई घण्टा जति लाइनमा बसेर,फार्मेसीको झ्यालमा पुगेर, डाक्टरले लेखिदिएको प्रेप्किसन बुझाएर,आधा घण्टा पर्खेपछि भित्रबाट जबाफ सहित प्रेप्किसन फिर्ता आउँछ यो औषधि यहाँ छैन । यति गर्न कसैलाई २ दिन कसैलाई ३ दिन लाग्दो रहेछ । अझ यस बीचमा त्यहाँका चिकित्सक र कर्मचारीको बोली, बचन र व्यबहार सम्झियो भने तुरुक्क आँसु चुहिन्छ भनेर गुनोसो पोखछन सेवाग्राहीहरु ।
हेटौंडा अस्पताल बिरामीहरुको उपचारकेन्द्र हो कि,यातना केन्द्र ? के यसलाई सिस्टममा लगेर सुधार गर्न सकिदैन ? यसलाई कसले सुधार गर्ने ? सुधार गर्ने जिम्मेवार कस्को ? यस्तै कुराहरु सामाजीक संजालहरुमा बग्रेल्ती छाईरहेकाछन् । अस्पतालमा यस्तो समस्या देखापरेपछि बिरामी झन थलापर्छ र हेटौडा अस्पतालको उपचारमा बिकल्प खोज्न थाल्छ । पैसा भएकाहरु त प्राईभेट अस्पताल पुग्लान सामान्य नागरीकले सरकारी अस्पतालमा उपचार सहज संग पाउन गार्है छ ।
हेटौंडा अस्पताल बग्रेल्ती समस्यालाई कस्ले हेर्ने कस्ले बुझने,समस्या ज्युउका त्युँनै छ ।